Kusvira Shelly kaCollege Student ! – VanodaZvinhu
Kusvira Shelly kaCollege Student !
by DrSviro · February 2, 2016
Nyaya iyi yakaitika gore randaiita hangu Degree paUnisa muPretoria, ndaine ndine shamwari yangu Tindo afaririra kuita shamwari through wechat. Akanditi awana musikana akana and he tried kumunyenga asi the girl arikumuramba.
Tindo ainge awana mumwe musikana ayiita everything naye kunze kwekusvira chete and he wanted to try make things work naye. Ndakatanga kuchat nemusikana uya ainzi Shelly and pandakangomuona paprofile pic mboro yangu yakabva yamira, she was 21 years, magaro ake were not too big, mazamu ake anwisa mvura. Ndakatumira Shelly a message and gave her my number pasina 2 minutes she called asking kuti ndini ani. I said ndini Matt and I got her number from Tindo and I explained but ainge asiri interested neni akabva ati please usatumire mamessage again. Handina kuita nharo ndakangoti I heard you but usati wakata please tell me the name of the sweet voice I am talking to, akaita kakunyarira zvikanzi ndinonzi Shelly after the we started chatting and calling each other building our friendship.
Next day ndakaenda kucollege and ndava pabreak ndakamufonera and she said ainge apedza kucollege kwake and she was going home, ndakamubvuma kuti is it time to meet yet akaita kunge asirikuda and lastly akati it’s fine we can meet. Takaonana tikatanga kutaura just general stories tichifamba kuenda kumba kwavo coz aigara close to the college. Ndakamupa hug ndikabva ndaramba ndaka pressa ndinyatsonzwa minyatso ichiguma chest yangu, ndakakumidza kumusiya nekuti mboro yangu ndainge ndakutonzwa ichimira. We said our good bye ndikadzokera back to college for my last late lecture. Ndaka muinviter for movie the next day and this is where I was going to make my first move yekubata mazamu ake just kuti ndizive kuti munhu akaita sei, akabvama tikabva taenda and tikagara kutop corner kwekuti vanhu would not see anything if they are concentrating on the movie.
Ndakaisa ruoko rwangu padumbu akabva aribvisa and I expected that but ndakaramba ndizama kusvika ndaona munhu adaira, ndakamubata mazamu ake slowly ndikatanga kumukisa ndibatabata mathighs ake slowing moving ruoko rwangu kubeche rake. Magariro atainge takaita ndaigona kungomugarisa pamakumbo ndikasvira asi ndakazviudza kuti if we did this then ndaizomusvira later. Shelly ainge atota manje anzwa nezemo asi ainyara , but told myself ndamuisa pacorner pandaida. Nezvainge zvaitika mumovie takaenda kumba and she wasn’t talking and I dropped her off, next day handina kana kumufonera kana kutumira sms I wanted her kuti atange kunditsvaga iye. Ndainge ndakaisa phone yangu on silent ndirimu lecture, after the lecture ndakaona ndine more than 20 missed calls and I ignored them. Ndasvika kumba late Friday ndakaziva kuti even if i return her calls ainge asingakwanise kuuya or me kuenda kunomuona that night, ndakamufonera apa ndakanzwa voice rake kuti ainge akatsamwa I apologised ndaikati ndanga ndakanganwa fone kumba today but I will make it up to her tomorrow Saturday.
by DrSviro · Published January 22, 2016
by DrSviro · Published January 30, 2015
Next story Madyirwo Andaiitwa Beche naDani – Aindidiridza Huronyo padumbu pangu!
Previous story Kusvira kwandakaita mainini munin’ina webabe ndisati ndaroora